အစိုးရနဲ့ တရားဥပဒေကို သိပ်ကို ရွံသွားပြီ
မေမွန်း(5 June 15) ﻿
ကိုထင်လင်းဦးက မဘသ တွေထောက်ခံနေတဲ့
စစ်အုပ်စုလို သံဃာတော်တွေကို မီးလောင်ဗုံးနဲ့ ဦးအောင်မထုနိုင်ခဲ့ဘူး။
လယ်တီဆရာတော်ကြီးရဲ့ သိမ်တော်နဲ့ ဘုရားစေတီကို
သန္တိသုခကျောင်းတော်ကြီးကို အတင်းအဓမ္မဝင်ရောက်စီးနင်းပြီး သံဃာတော်ငါးပါးကို
ပခုက္ခူမှာ သံဃာတော်အပါးငါးရာကျော်မေတ္တာပို့ လမ်းလျှောက်စဉ်က ကြိုးကွင်းနဲ့ပစ်ဖမ်း ဓါတ်တိုင်မှာကြိုးနဲ့တုတ်ပြီး သေနတ်ဒင်နဲ့မထုနိုင်ခဲ့ဘူး။
စစ်အုပ်စုလို သေနတ်နဲ့ပစ်သတ် ဝါးရင်းဒုတ်နဲ့ရိုက် ညဘက်မှာ
ကျောင်းတိုက်တွေကို သူပုန်စခန်းဝင်စီးသလို သေနတ်ပစ်ပြီး ဝင်ဖမ်းကာ သံဃာတော်တော်တွေကို ညှင်းဆဲသတ်ဖြတ်
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်မှာ သံဃာတော်တွေကို မန္တလေးမြို့ဆွမ်းလောင်းပွဲမှာ သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်လို့ ဆရာ
တော်ကြီးတွေက သပိတ်မှောက်တာကို မှောက်တဲ့သံဃာတော်တွေ တိပိဋကဓရကောဝိဒ ဆရာတော်ကြီး
တွေကိုပါမကျန် ဖမ်းဆီးထောင်ချနှိပ်စက်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။
စသည့်လက်တွေ့ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်စော်ကားပါသော်လည်း ပြန်လည် တောင်းပန်ခြင်း
မရှိပါသော်လည်း ယနေ့ထိတရားစွဲမည့် သူမရှိပဲ ထောင်ကျအောင်ဖိအားပေးမည့်သူမရှိပဲ အေးဆေး
စစ်အုပ်စုလိုဒီလုပ်ငန်းတွေကိုသာ ကိုထင်လင်းဦးလုပ်နိုင်မည်ဆိုလျှင် ယနေ့အချိန်ဆိုလျှင်
၂၀၁၅ မှာ သမ္မတအဖြစ်ဝင်ရောက်
အထက်ကဖေါ်ပြခဲ့သော လုပ်ငန်းများကို စစ်အုပ်စုလို မလုပ်ပြနိုင်သည့်အတွက် ကိုထင်လင်းဦးမှားပါသည်။လုံးဝမှားပါသည်။
မြန်မာပြည်ရဲ့ စုတ်ပြတ်သတ်နေတဲ့ တရားဥပဒေ၊ အစိုးရနဲ့ တရားဥပဒေကို သိပ်ကို ရွံသွားပြီ..
ကိုယ်ချင်းစာတရား ရှိတဲ့သူတွေကို ထောင်ထဲထည့်.. လူသတ် ဘိန်းရှူ ဓားမြတိုက် သူခိုးကြီး သူခိုးလေး အကုန်လုံး.. လူကြီး လူကောင်းပုံစံနဲ့.. တိုက်ပုံကြီး တကားကား.. အချိတ်ထမီ တကားကား လုပ်နေသူတွေကျတော့.. လွတ်လပ်စွာ သွားလာနေနိုင်ပါတယ်တဲ့လေ..
ဗုဒ္ဓက သတ္တဝါတွေအပေါ် ညဉ်းဆဲဖို့ မဆိုထားနဲ့. သတ္တဝါတွေ ငြိမ်းချမ်းစေဖို့ အမြဲ မေတ္တာဓာတ်တွေ ပို့လွွှတ်နေသူ... သူ့ကို စွပ်ဆွဲတဲ့.. စိဉ္ဇာမာနကိုတောင်.. သည်းခံ ဂရုဏာထားခဲ့တယ်.အပြစ်ရှိရင် လောက က အပြစ်ပေးမှာပဲ..
ကျောက်တုံးလှိမ်တွန်းချပြီး သူ့ကိုတောင် သတ်ဖို့ လုပ်ခဲ့တဲ့.. ဒေဝဒတ်အပေါ် ၇န်ငြို မထား.. ဗုဒ္ဓ အဆုံးအမ လိုက်နာသူ တစ်ယောက်ဟာ ကံ ကံရဲ့ အကျိုးကို ရင်ထဲ အသဲထဲက စွဲမြဲစွာ ယုံကြည်ရမယ်..
ဦးထင်လင်းဦး သီလသမာဓိ ရှိသူတွေကို စော်ကားရင် သူ့ အပြစ်နဲ့သူ သွားမှာပဲ.အခုလည်း အပြစ်ရှိလို့ သူ့အပြစ်နဲ့သူ သွားတယ်လို့ လာပြောရင် ပြောကြပါလိမ့်ဦးမယ်.. ထားပါ.. အပြစ်ရှိတာ မရှိတာ..
သို့သော် လူသားတစ်ယောက် ထောင်ကျလို့ ပျော်နေတဲ့ ဗုဒ္ဓသားတော်တွေကို တွေ့ရင် ဗုဒ္ဓက ဘာပြောမလဲ...
သံဃာဆိုတာ..လူသားတွေအတွက် ကုသိုလ်တွေ ဖြစ်ပေါ်ပေးနိုင်ရာ လယ်ယာမြေကောင်းသဖွယ်ပါလို့.. ဗုဒ္ဓ ဆုံးမခဲ့တာ..
သာသနာ ဘာလိုကြောင့်ကွယ်မလဲ.ဗုဒ္ဓအဆုံအမကို ပြန်ပြီး ရှင်းပြတဲ့. ဆရာတော်ကြီးတွေ က ပြောတယ်..
ငါဘုရား သာသနာ ကို ငါ ဘုရားသားတော်တွေက ဖျက်မယ်တဲ့..
ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ.. အကြမ်းဖက် ဝါဒဖြစ်အောင် ကမ္ဘာ့ သတင်းခေါင်းကြီးပိုင်းမှာတောင် ဖော်ပြခံရအောင် ပုထုဇဉ် လူဝတ်ကြောင်က မလုပ်ခဲ့ပါဘူး..
တပည့်တော်စိတ်မှာ.. အခု မစင်ကြယ်ပါဘူးဘုရား..သံဃာတောင် ရွေပြီး ကိုးကွယ်ရမလို ဖြစ်နေပြီ လူတစ်ယောကေ် ၇ထားတာ တွေ့တယ် ဆွမ်းခံကြွတဲ့ ကိုယ်တော်တောင် ဘယ်အဖွဲ့ကလည်း မေးပြီးမှ ဆွမ်းလောင်းရမလို ဖြစ်နေပြီတဲ့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဒီလိုစိတ်တွေ ဖြ်နေကြပြီ ၊
သီလသမာဓိ ရှိတဲ့ သံဃာတွေကိုပဲ ရွေးပြီး ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်ချင်စိတ် ဖြစ်နေပါပြီဘုရား. ဆင်းရဲပြီး ချို့တဲ့ကလေးတွေကိုပဲ.. လှူဒါန်း ချင်ပါတယ်ဘုရား... ဘယ်လိုလုပ်မလဲ..အခု တပည့်တော်မှာ ဖြစ်နေတဲ့စိတ်...
ဒီလို စိတ်မျိုးတွေ မြန်မာပြည်က ဒကာ ဒကာမ ဘယ်လောက်များများမှာ ဖြစ်နေကြမလဲ...
ဒီပုံစံအတိုင်း ဆက်သွားရင်.. မြန်မာပြည်မှာ အခြား သံဃာတွေပါ.. ဆွမ်း သင်္ကန်း ကျောင်းဆေး.. စသဖြင့် သိပ်ကို ခက်ခဲသွားတော့မယ်ဘုရား... အဲ့လိုခက်ခဲရင် သာသနာမှာ သံဃာတွေ မပျော်မွေ့နိုင်တော့ပါ..
သံဃာဆိုတာ စီးပွားမလုပ်ရ ဒကာဒကာမတွေကိုမှီခိုနေရသူတွေပါ. ဒကာဒကာမတွေ အကြည်ညို ပျက်လာရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ..
အမှားတရားတွေ ကြီးစိုးနေချိန်မှာ.. အမှန်တရားတွေ ခေတ္တခဏတော့.. ကွယ်ပျောက်နေဦးမှာပါ..
သတ္တဝါ အားလုံး စိုးရိမ်ကြောင့်ကြ ဆင်းရဲကင်းပြီး ကိုယ်စိတ်နှဖြာ ကျမ်းမာ ချမ်းသာကြပါစေ..
စေတနာကို ကံလို့ ယုံကြည့်တယ်..
တနေကုန်တက်လာသမျှ ပိုစ်တွေ ဖတ်ကြည့်ရင်း ခံစားမိပါတယ်
အချို ့ဘုန်းကြီးတွေလူတဦးတယောက်ထောင်ကျစေဖို ့
ကြတယ်။တကယ်တော ့မေတ္တာစိတ် အစားဒေါသစိတ်
တွေဖြစ်နေကြတဲ ့ဒီဘုန်းကြီးတွေရဲ ့သဏ္ဏာန်မှာ ဗုဒ္ဓရဲ ့
ပြန်ရဲ ့။ဗုဒ္ဓရဲ ့သာသနာမှာအမျိုးသားရေးတံဆိပ်တွေကပ်ခံ
နေရတာကိုများ ဗုဒ္ဓ သာသိခဲ ့ရင် ဘယ်လိုနေရှာမလဲ။
ဗုဒ္ဓဖြစ်ဖို ့တောထွ်ပြီးထီးနန်းစွန် ့ခဲ ့တာတွေဟာအမျိုး
သားရေးအတွက်များဖြစ်နေလို ့လားဆိုပြီးမရဲတရဲနဲ ့
ကပိလဝတ်မှာ ထီးနန်းဆက်ခံမယ် ့သူမရှိဖြစ်သွားရတဲ ့
ပုံရိပ်တွေ။ ဗုဒ္ဓက လူတွေကို ၃၁ ဘုံကဆွဲထုတ်ဖို ့တရား
ရှာထွက်ခဲ ့တာတွေအစား ယနေ ့ဘုန်းကြီးအချို ့ရဲ ့အမျိုးဘာ
တွေအစားသွင်းနေလေတော ့။အင်း !!!!!
ကျမ အမျိုးသား ထောင်ကျပြီးကျမတို့မိသသားစု စီးပွားပျက် ဒုက္ခရောက်အောင် မိသားစု
ကွဲကွာနေရ အောင် အမှုကိုစတင်ရင်ဆိုင်ရတဲ့ 17-12-2014 နေ့ကထဲကကြွေးကြော်သံ
တွေနဲ့ ထင် လင်း ဦး ကိုထောင်ချပစ် အာမခံမ ပေးနဲ့ လို့ဖိအားပေးခဲ့သလို နောက် ရုံးချိန်း
၄ ကြိမ်လောက် တရားရုံး ထဲလာပြီး အာဏာပိုင် တွေ က ထိုင် ခုံချပေးပြီးနေရာပေး ရတဲ့
မ ဘ သ များ က ကျမအမျိုးသား အမိန့်ချတဲ့ နေ့ အုပ်စုလိုက် လာရောက်ဖိအားပေးနေကြ
တာကို လာရောက်ကြားနာတာဆိုတဲ့ မုန်လာဥ စကားတွေသုံးနေတာပါဘဲ။
တရားဥ ပ ဒေ အထက်မှာ အာဏာရှင် န ဲ့ငွေ ကြေး လာတ်စားအဂတိလိုက်စားမှုတွေဘဲ သိခဲ့ရတာပါ။
နောက်တိုးအသိတစ်ခုက မ ဘ သ အမည်နဲ့ ဘုရားသားတော် သမီးတော်များဟာ
မေတ္တာတရားကင်းမဲ့နေတာ ဥ ပ ဒေ အထက်မှာရှိနေတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။
ဘာသာ သာသနာ ပျက်စီးသွားမှာစိုးရိမ်စိတ်နဲ့ လူထုကို အသိပေးယင်းစစ်မှန်တဲ့ဘာသာ
တရားကိုထောက်ပြ ဝေ ဘန် တာနဲ့ အလုပ်ကြမ်းနဲ့ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်ချလိုက်တာပါ။
ကျမတို့မိသားစုခွဲခွာနေရပြီး ၆ တန်းကျောင်းသားကျမတို့သားလေးရဲ့စိတ်အနာတရ
တွေကို ဖခင် လိုရောမိခင် စိတ်နဲ့ပါ အစွမ်းကုန်ကုစားပေးရမှာပါ။
ဦးထင်လင်း၏ ဇနီးေပြာကြားချက်